Ogaden News Agency (ONA) – Le Pen & Macron oo Isugu Soo Hadhay Doorashada Faransiiska.
Le Pen & Macron oo Isugu Soo Hadhay Doorashada Faransiiska.
Posted by ONA Admin	/ April 25, 2017
Wareega 1aad ee Doorashada Madaxweynaha Faransiiska oo Axadii la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay labada murashax ee kala ah Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen oo iyadu hogaamisa xisbiga xagjirka ah. Doorashada Madaxweynaha Faransiiska oo labo wareeg la qabto ayaa wareega ugu danbeeya la qaban doonaa 7-da bisha soo socota ee May 2017.
Murashaxa Emmanuel Macron oo ah 39 sano jir oo horey usoo qabtay xilka Wasiirka Maaliyada sanadkii 2014 kii ayaa noqday murashaxa ugu cododka badan isagoo helay 23,9% cododka, halka kaalinta labaad ay gashay Ms. Marine Le Pen oo heshay 21,7% cododka. Waxaana halkaasi ku hadhay 9-kii kale ee murashax oo ay ku jireen kuwii ka socday xisbiyada waaweyn ee dalkaasi oo sanadkan jab weyn ka dhaxlay isbedalka siyaasadeed ee ka jira dalkaasi.
Mr.Macron ayaa isagu aan kamid ahayn xisbiyada waaweyn isagoona si madax banaan u galay tartanka, waxaana horey shaki loo gelinayey inuu heli doono taageero weyn maadaama uusan heysan xisbi weyn oo gacan siiya, waana markii ugu horeysay oo uu tartamo xilka Madaxweyne. Guushiisa Macron ayaa waji gabax ku noqotay xisbiyadii waaweynaa oo iyagu ku haray wareega kowaad.
Emmanuel Macron ayaa isagu si weyn u taageera Midowga Yurub iyo suuqyada isu furan ee caalamka, wuxuuna horey uga soo tirsanaan jiray Xisbiga Social Party oo uu isaga soo baxay. Waa nin dhanka dhaqaalaha muddo dheer ku soo jiray horeyna uga soo shaqeeyey Bangiyada dalkaasi.
Mr. Macron ayaa loo badinayaa inuu ku guuleysto doorashada wareega 2aad maadaama dhamaan murashaxiinta kale oo waaweyn ay taageerayaashooda ugu baaqeen inay codka siiyaan si looga hortago in ay xilka qabato haweenayda xagjirka ah ee Marine Le Pen oo hada noqotay xisbiga 2aad ee ugu weyn wadankaasi.
Mrs. Le Pen oo iyadu ololaheeda uga faa’iideysaneysa cadhada shacabka dalkaasi oo si weyn u dhaliilsan xisbiyada horey hogaanka usoo qabtay, waxayna ku doodeysaa inay wadankaasi ka saari doonto Midowga Yurub (EU). Arrintaasi hadii ay dhacdo waxaa hubaal ah inay burbureyso EU madaama Faransiiska uu yahay dalalka laf-dhabarta u ah Midowgaasi.
Ms. Le Pen oo xilka xisbiga ay heyso ka dhaxashay aabaheed oo isagu ahaa cunsuri kale oo si weyn u neceb dadka soogalootiga ah ayaa sheegtay inay la dagaalami doonto waxa ay ugu yeertay Islaamka xagjirka ah, iyadoo sidoo kale sheegtay inay sare u qaadi doonto tiradda ciidamada la dagaalanka argagaxisada.